Ny AYANA Hotels dia manambara fanendrena mpanatanteraka vaovao
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Ny AYANA Hotels dia manambara fanendrena mpanatanteraka vaovao
Any amin'ny 12 kilometatra monja miala ny seranam-piaramanidina iraisampirenena any Bali Yana Hotel no manana morontsiraka hantsana 1.3 kilaometatra ambonin'ny tampon'ny Helodrano Jimbaran.
Ilay trano 90 hektara koa dia trano fonenan'i RIMBA Jimbaran BALI avy amin'i AYANA, efitrano fandraisam-bahiny 403, ary AYANA Residences, vondrom-piarahamonina mipetraka voalohany Bali hipetraka miaraka amina trano fandraisam-bahiny dimy. Ny efitrano sy efitrano 294 an'ny AYANA dia mampifangaro ny hakantony amin'ny hatsarana nentim-paharazana Bali, raha ny efitrano tsirairay kosa dia misy atiny famolavolana, fandroana marbra, lavarangana vita fanaka ary vavahady mifampitohy.
Ahitana villa mirehitra 78 ihany koa ilay toeram-pialan-tsasatra, feno dobo filomanosana manokana sy atsy an-dranomasina mahatalanjona; spaoro 22,000sqm ahitana efitrano fitsaboana 53, miaraka amin'ny iray amin'ireo dobo fantsom-panafody an-dranomasina lehibe indrindra eto an-tany sy ny villa Spa on the Rocks eo amin'ny hantsana ambonin'ny Ranomasimbe Indianina; 15 toerana fampakaram-bady; Dobo filomanosana 12 vaovao ahitana ny pisinin-jaza; farihy ranomasin-dranomasina tsy manam-petra Ocean Beach Pool eo am-pototry ny hantsana; morontsiraka manokana; Toeram-pisakafoanana 19; Toerana fihaonana 15; 18-hole golf fametrahana; Kianja tenisy 2; lalana mihazakazaka; Toeram-panatanjahan-tena 2; Klioban'ny ankizy 2 sy ivon-toeran'ny orinasa
Stefan Fuchs, Tale Jeneraly - Hotely AYANA any Bali
Teraka sy nianatra tany Alemana, Stefan dia nanomboka ny asany tamin'ny Sakafo sy Fisotroana any Eropa, izay niandraiketana ny tetikasan-tsakafo isan-karazany toy ny EXPO 1998 tany Lisbon sy ny hetsika Grand Prix 1 an'ny Formula 2006. Tany Moyen Orient dia nitarika ny hetsika ho an'ny Konferansa Islamika sy ny Lalao Aziatika tany Doha, Qatar izy ary anisan'ny ekipa mpanokatra ny Hotely Ritz-Carlton any Russia, Japan, China ary Bahrain. Teo anelanelan'ny 2014 sy XNUMX Stefan dia niaraka tamin'ny Jumeirah Group. Ny tanjon'i Stefan ho an'ny AYANA dia ny hanamora ny endrik'ilay orinasa ho mpanome tolotra fandraisam-bahiny manankarena matanjaka sy azo itokisana na eo an-toerana na any ivelany.
Christian Jaquier, mpitantana hotely - Hotely AYANA any Bali
Teraka tany Brezila ary tapaky ny Soisa sy tapany sinoa, Christian dia niditra tao amin'ny fianakaviana AYANA ho Mpanampy Mpanampy ao amin'ny efitrano tamin'ny taona 2015. Nisondrotra tamin'ny toeran'ny Mpitantana Hotel izy tamin'ny taona 2019. Manohana an'i Stefan Fuchs i Christian amin'ny fanaraha-maso ny efitrano fandraisam-bahiny 775, suite sy villa tsy miankina amin'ny hotely AYANA any Bali. Mba hitazomana hatrany ny fifandanjan'ny asa fandraisam-bahiny midadasika toy izany, ny fifantohan'i Christian dia ny andry telo lehibe amin'ny fandraisana anjaran'ny vahiny, ny fahombiazana ara-bola ary ny fandraisan'anjaran'ny mpiasa. “AYANA dia toeram-pialantsasatra tsy manam-paharoa izay mampiavaka azy amin'ny fananana hafa eto amin'ny nosy amin'ny alàlan'ny fanolorana ny tsara indrindra any Bali amin'ny toerana iray mahavariana. Afaka mitsidika ny Nosy ny andriamanitra ireo vahiny nefa tsy mila miala. Ny tolo-kevitro farany ambony dia ny fijerena ny seho Kecak ao Kampoeng Bali, ny fitrohana voanio vaovao ao amin'ny Kubu Beach Club ary ny fanaovana sonia ny ankizy ho an'ny lesona dihy Bali ao amin'ny AYANA Kids Club. ”
Michi Sonoda, mpitantana mpanampy mpanatanteraka, varotra ary marketing - Hotely AYANA any Bali sy Komodo
Teraka tany Japon, Michi dia nanomboka ny asany tany amin'ny spa sy ny antsinjarany niaraka tamin'ny The Ritz-Carlton, Bali tamin'ny taona 1997, izay niditra tao amin'ny AYANA Resort and Spa, BALI tamin'ny taona 2009. Tamin'ny taona 2020 dia natolotry ny talen'ny Sales & Marketing ho any EAM, SM izy. toerana, izay andraikiny amin'ny fanombohana, ny drafitra, ny fitantanana ary ny fitantanana ny fampiharana ny paikady varotra sy marketing ho an'ny AYANA Hotels. Izy no mitarika ny hetsiky ny ekipa Varotra, Fifandraisana Marketing, Hetsika ary Famandrihana, miantoka ny fampifanarahana ny hetsika rehetra amin'ny paikadin'ny orinasa manana.
Patrick Callarec, Chef mpanatanteraka - Hotely AYANA any Bali
Tompon'antoka tamin'ny famoronana traikefa nahandro nandresy tamin'ny loka 19 tany amin'ny toerana sonia nanerana ny AYANA sy ny RIMBA, Chef Patrick dia chef frantsay quintétiantaly manana résumé kintana dimy tsy mety diso. Talohan'ny nidirany tao AYANA, ny diany nahandro dia natomboka tao amin'ny tanàna amoron-dranomasina amoron-dranomasina any Cannes, France tamin'ny 1977 ary nitondra azy tany Bali taorian'ny nanokafany tamim-pahombiazana ny toeram-pialan-tsasatra Disney tany Hawaii. Ny asan'ny Chef Patrick dia nitondra azy nanerana an'izao tontolo izao nandritra ny 25 taona lasa, raha nitana toerana ambony tao amin'ny trano fisakafoanana tsara tarehy izay hita ao anatin'ny marika fandraisam-bahiny malaza toa an'i The Ritz-Carlton, Four Seasons ary Le Meridien. “Ny asako dia nanamafy ny fahaizako amin'ny tontolo haingam-pandeha ao amin'ny sehatra fandraharahana mampiavaka an'i AYANA, izay anananay trano fandraisam-bahiny roa manerantany manolotra karazan-tsakafo iraisam-pirenena maro karazana any amin'ny trano fisakafoanana nahazo loka.”
Manik Sudarsana, Sakafo sy zava-pisotro EAM - Hotely AYANA any Bali
Manana traikefa mihoatra ny 16 taona amin'ny indostrian'ny fandraisam-bahiny i Manik Sudarsana mahatsapa fa mahazo aina amin'ny fiasana avy any ambadiky ny lakozia izy, satria manompo ny vahiny hotely amin'ny tany. Narahabaina tamim-pitiavana ny ekipa fitantanana iraisam-pirenena AYANA tamin'ny Novambra 2013, ity matihanina avy any Bali ity dia manara-maso ny fenitra fanompoana avo lenta manerana ny trano fisakafoanana sy fisotroana fisakafoanana tsy manam-paharoa 19 an'ny AYANA, ao anatin'izany ny foto-kevitra momba ny grill ankehitriny ao amin'ny DAVA; BBQ hazan-dranomasina amoron-dranomasina ao Kisik; ary ny toerana filentehan'ny masoandro filentehan'ny Rock Bar, BALI. “Miezaka ny hitandrina amin'ny antsipiriany amin'ny zavatra rehetra ataoko aho. Tena tiako ny fanompoana tsy misy kilema ary manompo ahy tsara amin'ny anjara andraikitro amin'ny fitantanana ny fiaraha-misakafo amin'ny AYANA Hotels 'sy ny sampan-draharahan'ny fikarakarana sakafo eo an-toerana izany. AYANA dia iray amin'ireo safidy lehibe indrindra any Azia amin'ny hetsika MICE sy fampakaram-bady, ary tianay ny manome antoka fa ny latabatra tsirairay dia mampanan-karena ny traikefa ananan'ny vahiny amin'ny ankapobeny. ”
Harry Nugroho, talen'ny sakafo sy zava-pisotro - RIMBA Jimbaran BALI nataon'i AYANA
Teraka tao Jakarta, nanomboka ny asany amin'ny fandraisam-bahiny amin'ny sakafo sy zava-pisotro i Harry miaraka amin'ny Grand Hyatt, JW Marriott ary hotely Intercontinental ao an-drenivohitra Indonezia. Taorian'ny nifindrany Bali tamin'ny 2007, izay izy dia tao amin'ny ekipa Le Meridien Jimbaran mialoha ny fisokafany ary avy eo, RIMBA Jimbaran BALI avy amin'i AYANA. Faly mijery sarimihetsika vaovao i Harry, mitaingina moto ary mandeha mitety an'i Indonezia.
“Ny fahitako an'i RIMBA dia ny fananana azy ho fananana lehibe ao Jimbaran miaraka amina serivisy miavaka, foto-kevitra vaovao, fandraisana olona ary fotodrafitrasa miavaka. RIMBA dia manolotra safidy maoderina hipetrahana sy rivo-piainana miala sasatra isaky ny zoro. Miaraka amin'ny fijerinay lafy tsara sy ny fandraisana ny kolontsaina Bali, dia mikarakara ny vahininay 24/7 izahay ary manome hatrany ny serivisy mihoatra ny antenain'izy ireo. ”
Sylvain Vodermaier, talen'ny efitrano - AYANA Resort and Spa, BALI ary The Villas ao AYANA Resort, BALI
Ny antsasaky ny Frantsay sy ny antsasaky ny Alemanina, Sylvain dia nanomboka ny asany tamin'ny fandraisam-bahiny tany Munich, Alemana, izay nitohy tamin'ny fiofanana vahiny hafakely tany Mandarin Oriental any Hawaii, Etazonia. Nanokatra fananana enina ihany koa izy tany Berlin, Hamburg, Zurich ary Wina talohan'ny nanombohany ny diany tao amin'ny hotely Kempinski Hotel tao Beijing, Sina. Sylvain koa dia liana amin'ny fanatanjahan-tena, fitsangatsanganana ary sakafo lehibe.
Ahmed El Sandoby, talen'ny Wellness and Spa - Hotely AYANA any Bali
Teraka tany Egypt, Ahmed miteny anglisy sy arabo mahay. Niasa tamina marika lafo vidy vitsivitsy toy ny Four Seasons, Westin, Le Meridien ary Jumeirah any Egypt, Bahrain, UAE ary Saudi Arabia izy. “Sambatra aho fa monina any Bali satria tiako be ny vibes tropikaly ao amin'ilay nosy, fomba fiaina milamina, voninkazo maitso, tendrombohitra sy morontsiraka hatramin'ny fitsidihako voalohany ny nosy Gods. Ny tetik'asa matihaniko ho an'ny AYANA Wellness and Spa dia ny hahatonga azy io ho tanjona ao anatin'ny toerana haleha, hitondra fiheverana ho an'ny fahasalamana tanteraka avy amin'ny programa fampihenana lanja, fifehezana, sakafo mahavelona ary fitsaboana ara-pahasalamana. Tiako ny mihazakazaka, mankeny amin'ny gym ary mihinana salama nefa tsy mahazaka paty lovia tsara aho indraindray. "
Jones S. Widjaja, talen'ny fitantanam-bola - Hotely AYANA any Bali sy Komodo
Niasa tao amin'ny trano fandraisam-bahiny AYANA nandritra ny enin-taona, ity teratany sinoa teratany sinoa ity dia manana mari-pahaizana MBA avy amin'ny anjerimanontolon'i California State University ao Long Beach ary mari-pahaizana momba ny kaonty fitantanana (CMA) ary miasa ihany koa amin'ny fahazoana ny mari-pankasitrahana momba ny mpandalina ara-bola vaovao. Jones dia mikarakara ireo Hotely AYANA any amin'ny nosy Bali sy Flores. Tiany ny milomano, ny fakana sary raha ny satay no steak tena tsara ary steak tsara.
Nyoman Suryawan, Tale mpanampy ny injeniera - Hotely AYANA any Bali
Teraka tany Bali, ity teratany Indoneziana ity dia efa niaraka tamin'ny AYANA efa-taona mahery izao. Nanomboka tamin'ny toeran'ny RIMBA ho Lehiben'ny injenierany izy ary avy eo dia nisondrotra tamin'ny toerany ankehitriny, izay manara-maso ny hotely AYANA rehetra eto amin'ny nosy. Nyoman dia manana mari-pahaizana 'masinina teknika' avy amin'ny Oniversite Udayana any Bali, Indonezia. Tiany ny milalao baolina kitra sy basikety raha sinoa no sakafo tiany indrindra.
Nanjary 'faritra tsy misy fiaramanidina' i India taorian'ny fametrahana ny sidina anatiny rehetra
Emirates, Etihad, Air Arabia, Fly Dubai ary ny seranam-piaramanidina UAE dia mampiato ny sidina sy ny fitaterana